Entsha LOFT 280 M2, ichibi labucala, 200 m ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Entsha LOFT 280 M2, ichibi labucala, 200 m ukusuka elunxwemeni
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguChristophe
Ngokupheleleyo indawo pool yabucala, Ihotele ilinen (iibhedi, izingxobo duvet, iimakhishithi, iitawuli) iintsholongwane kunye ucocekile yinkonzo yobungcali enikiweyo, okulala 2, lokuhlambela kunye uhlamba, WC ezahlukeneyo; yaxhobisa ngokupheleleyo kitchen American, Nespresso umatshini ikofu (njengezingxobo akasinikanga). Idama lokuqubha labucala neligqunyiweyo 9 x 4m ubunzulu 1.65m. I-Terrace 40 m2. 200 m ukusuka elwandle, kufutshane kumbindi wedolophu kunye neevenkile, yekhasino. yokupaka Private. Ivenkile enkulu ekufutshane ukuba uyokuthenga
Iloft entsha entle kakhulu kwi-220 m2 = 80 m2 f3 + 140 m2 ichibi lokuqubha, elixhotyiselwe eyona ntuthuzelo inkulu kubo bonke, abazali nabantwana baya kubuliswa ndim ngokwam ngenkcazo ngendawo yokuhlala kunye nokusebenza kwezixhobo. Le loft ye-500 m2 kumgangatho ophantsi ohlukaniswe yi-swimming pool ikwindawo yokuhlala yangasese, uya kunandipha ichibi lokuqubha ngokwakho.Ibekwe kwindawo ezolileyo kwi-boulevard enkulu. Imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka erue de la mer, iivenkile, ivenkile enkulu, indawo yokungena enkulu elunxwemeni, indawo yekhasino yaseBarrière, indawo eyaziwayo nesanda kulungiswa ngokutsha ithalassotherapy. Iindawo zokutyela ezininzi kunye nezindlu zaselwandle. Ichweba lokuloba, imarike yeentlanzi, phakathi ko-Oktobha ukuvulwa kwe-coquille St Jacques. Mazangwa isitya, isikolo ngomkhombe, iziko samahashe, karting, yokudada ... Sondela Deauville, i Umvuzo d'Auge, esimhlophe kokwehla, Caen noWilliam koloyiso ... uxhulumaniso eziliqela ngosuku kunye Portsmouth ngenxa yokulwa phesheya IsiNgesi Ijelo ... ithuba lokuloba elwandle kunye ne-skipper kwi-Ouistreham ukusuka kwi-€ 50 ngesiqingatha sosuku, i-mackerel, i-sea bream, i-sea bass, i-sea bass. Ndiza kuhoya ugcino lwakho njengoko kufuneka. Ungalibazisi ukuqhagamshelana nam
Isakhiwo esithule kakhulu ngaselwandle, abamelwane bahle kakhulu kulo lonke Ibekwe kwindawo ezolileyo kwi-boulevard enkulu. Imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka erue de la mer, iivenkile, ivenkile enkulu, indawo yokungena enkulu elunxwemeni, indawo yekhasino yaseBarrière, indawo eyaziwayo nesanda kulungiswa ngokutsha ithalassotherapy. Iindawo zokutyela ezininzi kunye nezindlu zaselwandle. Ichweba lokuloba, imarike yeentlanzi, phakathi ko-Oktobha ukuvulwa kwe-coquille St Jacques. Mazangwa isitya, isikolo ngomkhombe, iziko samahashe, karting, yokudada ... Sondela Deauville, i Umvuzo d'Auge, esimhlophe kokwehla, Caen noWilliam koloyiso ... uxhulumaniso eziliqela ngosuku kunye Portsmouth ngenxa yokulwa phesheya IsiNgesi Umjelo ... ukuba ufuna ukuloba kwisikhephe, kunokwenzeka kwi-ouistreham unganqikazi ukundibuza, ndiyakwazi ukuyiphatha kuwe.
je me fais le loisir de vous accueillir à chaque fois , merci de votre visite en Normandie , si vous ne la connaissais pas , je suis votre hôte, guide , conseils tout au long de v…
Ndihlala kwisakhiwo esinye, ndihlala ndifumaneka xa kukho ingxaki okanye iimfuno ezithile. Uya kuba kuphela abasebenzisi be-pool
Iilwimi: English, Français, Русский
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$856
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ouistreham